Vaovao - Roller Bearings
Toy izany koa namboarina toy ny baolina bearings, bearings roller manana fifandraisana an-tsipika fa tsy point contact, ahafahan'izy ireo manana fahaiza-manao lehibe kokoa sy fanoherana ny hatairana ambony. Ny roller dia avy amin'ny endriny maro, izany hoe silindrano, boribory, tapered ary fanjaitra. Ny bearings amin'ny roller cylindrical dia mitarika enta-mavesatra voafetra ihany. Ny bearings amin'ny spherical dia afaka mandray tsy fitoviana sy fanosehana bebe kokoa, ary, raha avo roa heny dia atosika amin'ny lafiny roa. Tapered roller bearings dia afaka mitantana enta-mavesatra lehibe. Ny fanjaitra fanjaitra, karazan-tsolika misy varingarina, dia afaka mahazaka enta-mavesatra avo lenta noho ny habeny, ary azo atao toy ny bearing roller thrust.
Rolling bearings dia misy satria ny famenon-drakitra feno sy ny fanjaitra fanjaitra saika matetika dia ho toy izany fomba. Ny bearings amin'ny fanjaitra dia mandaitra indrindra amin'ny fihetsiky ny valiny, saingy ny fifandonana dia ho avo kokoa noho ny fikororohana-roller-roller.
Rehefa mampiasa bearings roller cylindrical amin'ny shafts misy ny tsy fitoviana amin'ny angular, dia aleonao mampiasa bearings rojo fohy miverina mankany aoriana fa tsy mitondra lava lava.
Misafidy Ball na Bearing Roller
Toy ny fitsipika ankapobeny, bearings baolina dia ampiasaina amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa sy maivana kokoa noho ny bearings roller. Rolling bearings dia mahomby kokoa noho ny hatairana sy ny famoahana ny fiantraikany.
Ny bearings amin'ny baolina dia amidy amin'ny fivoriambe ary soloina unit fotsiny. Rolling bearings can be matetika disassembled and the roller carrier and roller, na ny hazakazaka ivelany na anatiny, nosoloina tsirairay. Ny fiara mandeha amin'ny kodiarana dia mampiasa ny fandaminana toy izany amin'ny kodiarana eo aloha. Ny tombony an'ity famolavolana ity dia ny fihazakazahana dia azo ahena ao anaty vatan-trano sy any an-trano mba hamoronana fivoriambe maharitra nefa tsy iharan-doza amin'ny fanakonana.
Ny bearings amin'ny laharana tokana dia namboarina ary azo ampiasaina mifandimby amin'ireo mpanamboatra. Ny bearings amin'ny roller dia somary avo lenta kokoa noho izany ka mila manontany amin'ny katalaogin'ny mpanamboatra ny mpandinika iray hisafidianana iray mety amin'ny fampiharana.
Rolling-element bearings dia amboarina miaraka amina habetsahan'ny fahazoan-dàlana anatiny. Ny tsy fanitsiana izay manosika fotsiny ny baolina tsy amin'ny toerany ary manaisotra ity fahazoan-dàlana anatiny ity dia tsy tokony hisy fiatraikany lehibe amin'ny ain'ny fiterahana. Rolling bearings dia mora tohina kokoa amin'ny zoro misalignment. Ohatra, ny baolina mitondra haingam-pandeha haingam-pandeha miaraka amina milamina somary malalaka dia mety hiasa am-pahombiazana amin'ny tsy fitoviana amin'ny angular hatramin'ny 0,002 ka hatramin'ny 0,004 in./in. eo anelanelan'ny mitondra sy ny hazo. Ny filanjana varingarina silindrika, raha ampitahaina, dia mety ho sahirana raha mihoatra ny 0,001 in./in ny tsy fitoviana. Ireo mpanamboatra amin'ny ankapobeny dia hanome laharana azo ekena ho an'ny tsy fitoviana amin'ny zorony.